Public Health in Myanmar: အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁)
ဆေးသမား မရွံရ၊ လူနာဖြစ် မရှက်ရဘူးတဲ့။ စအိုနဲ့ရော လိင်နဲ့ပါ ပတ်သက်တာမို့ ရွံစရာ-ရှက်စရာဆိုတာလေးတခု ရေးပါရစေ။
ကြားဘူးတယ် မဟုတ်လား၊ မဏိပူ (ကသည်း) ပုဏ္ဏားတွေဟာ အင်မတန် အသန့်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ။ ထမင်းချက်ရင် စည်းဝိုင်းဝိုင်း ချက်တယ်။ ၀ိုင်းထဲကို ဘယ်သူမှ မ၀င်ရဘူး။ ရေမိုးချိုးပြီး၊ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကို အ၀တ်စီးတယ်။ အင်္ကျံတော့ မ၀တ်ဘူး။ တချို့ထူးတာက ဘယ်ဘက်လက်ကို စည်းဝိုင်းအပြင် ထုတ်ထားရသတဲ့။ ဘယ်လက်က (ရိုင်းတယ် ပြောတော့ဗျာ)၊ ၀မ်းသွားပြီးတိုင်း ဖင်ဆေး-သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့လက်မို့ ရွံတယ်ပေါ့။ မေးချင်တာက ၀မ်းသွားတဲ့ (ဖင်)ကတော့ စည်းဝိုင်းထဲမှာ မဟုတ်ပါလားလို့။
စအိုကနေ၀င်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါဆိုတာ ဆေးစာထဲမှာ မရေးကြသေးပါ။ Feco-oral route စအို-ပါးစပ် လမ်းကြောင်းကနေ ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတွေဆိုတာတော့ ရှိတယ်။ ၀မ်းလျော၊ ၀မ်းပျက်၊ ၀မ်းကိုက်၊ ကာလ၀မ်း၊ အူရောင်ငန်းဖျား၊ အသဲရောင် အေ၊ ပိုလီယို၊ ဆာလ်မိုနယ်လိုဆစ်၊ ရိုတာ-ဗိုင်းရပ်စ်၊ စတာတွေပါတယ်။ စအိုကနေ”ထွက်”ပြီး၊ ပါးစပ်ထဲကို တနည်းနည်းနဲ့ ၀င်လို့ ဖြစ်ရတာတွေပေါ့။ အခုခေတ်မှာကြ စအိုကနေ”၀င်”တာတွေ ဖြစ်လာနေပါပြီ။ စအိုကို တလွဲသုံးလာကြလို့ပါ။
ခန္ဓာဗေဒဆိုတာ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုတွေ စစချင်းသင်ယူရတဲ့ဘာသာရပ်တခုပါ။ ၁၉၁၈ ကတည်းက ရေးခဲ့ပေမဲ့ ကနေ့အထိ ခန္ဓာဗေဒကို အပြည့်စုံဆုံး ရေးထားတဲ့စာအုပ်က Gray's Anatomy ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့နောက် ခန္ဓာဗေဒ ပညာရှင်တွေ ရေးသမျှ စာတွေ-ကျမ်းတွေမှာလဲ ဖင်(စအို)ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကို An excretory organ or an eliminative channel အညစ်အကြေး စွန့်ထုတ်ပေးရသောအင်္ဂါလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ၀မ်းသွား-လေလည်တာပေါ့။ ခုတော့ တာဝန်ပိုတွေပါ ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်။
စအိုရဲ့မွေးရာပါအလုပ်ကို ပဌမ နားလည်သင့်ပါတယ်။ သူ့အထက်က Rectum အစာဟောင်းအိမ်ထဲမှာ မစင်(၀မ်း)တွေ ပြည့်လာတာနဲ့ ၀မ်းသွားချင်စိတ် ဖြစ်လာပြီး၊ စအိုနံရံတွေက ကျယ်လာပါတယ်။ အစာဟောင်းအိမ်က အပေါ်ကနေ အောက်ဆီ ဦးတည်တဲ့လှုပ်ရှားမှု Peristaltic waves အရ မစင်(၀မ်း)တွေဟာ စအိုထဲဝင်လာချိန် အထိန်းကြွက်သား အ၀ိုင်းတွေက လျော့ဖွင့်လိုက်လို့ ၀မ်းသွားခြင်း ဖြစ်လာတာပါ။ “စအိုထဲကို အပြင်ကနေ ထိုးသွင်းတာကို လက်ခံရမဲ့ အစီအမံဆိုတာ လုံးဝမရှိပါ။”
နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ လောက်က ထွန်းကားခဲ့တဲ့ (အိန္ဒု)ယဉ်ကျေးမှုခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ အထောက်အထားတွေ၊ နောက်ပြီး ၂ ရာစုက ရှိခဲ့တဲ့ (အာဂျန်တာ) လှိုင်ဂူက ရုပ်တုတွေ၊ တခါ ဟိန္ဒူဘုရားတဆူဖြစ်တဲ့ သျှီဗား ရဲ့တံခါးမှူး မြင့်မြတ်သော နွားလား နန္ဒီကနေ သူ့သခင်(ဘုရား) နဲ့ ဒုတိယ မယား (ပါရ်ဗသီ)တို့ရဲ့ ချစ်ကြွမ်းဝင်ကြပုံ (နည်းအစုံစုံ) တွေကို ကြားသိပြီးသကာလ နောင်လာနောက်သား လူအများအကျိုးငှာ ဖေါက်သည်ပြန်ချခဲ့လို့ သက္ကတဘာသာနဲ့ ရေးမှတ်ခဲ့တဲ့ (ကာမသျှတ္တရ)ကျမ်း ဆိုတာတွေ ကြည့်ရင် လိင်ဆက်ဆံမှုပညာဆိုတာဟာ သမားရိုးကျထက် ဆန်းပြားပါလားလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဆန်းတာတွေ ရှေးကတည်းကရှိလို့ ဆန်းတာ ဘာဆန်းတာမှတ်လို့၊ လုပ်သာလုပ်၊ စမ်းချင်စမ်းလို့ အားမပေးလိုပါ။ ဆက်ဖတ်ပါခင်ဗျား။
Anal sex ဟာ အများထင်သလို အန္တရာယ်မရှိ မဟုတ်ပါ။ စအိုထဲမှာ ဖုံးထားတဲ့ အပေါ်ဖုံးအလွှာဟာ သာမန် အရေပြားလို မဟုတ်ဘူး လူ့အရေပြားဆိုတာက Kerotinized လုပ်တားတာ။ (ကရတင်)ဆိုတဲ့ ပိုခိုင်မာတဲ့ (တစ်ရှူး)နဲ့ ဖုံးနေတာ၊ စအိုထဲမှာ အဲဒါ မရှိဘူး။ နောက်ပြီး စအိုမှာ (စဖင်တာ)ဆိုတဲ့ ကြွက်သားဝိုင်းရှိတယ်။ နှစ်ထပ်တောင် ရှိတာ၊ အပြင်ကောင်က စိတ်ကနေ ထိန်းနိုင်ပြီး၊ အထဲဝိုင်းကတော့ ထိန်းမရဘူး။ သူတို့က ၀မ်းသွား-လေလည် အ၀င် အထွက်ကို ထိန်းပေးတာ။ တကယ်လို့ တစုံတခုက စအိုကို လာထိတာနဲ့ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ သဘောဝအရ (စဖင်တာ)က ပိုပြီး တင်းတောင့် ပိတ်ဆို့တဲ့ တုံ့ပြန်မှု လုပ်ပါမယ်။ Reflex ခေါ်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် မာတာနဲ့ ထိုးမိရင် စုတ်ပြဲသွားနိုင်တယ်။ တကယ်လို့ အလိုမတူသူ ဖြစ်နေရင် ပိုဆိုးမှာပါ။ အရေပြားလွှာ ၃ ထပ်ရှိတဲ့ မိန်းမကိုယ်နဲ့ မတူတာက ၁ ထပ်တဲရှိတဲ့ စအိုဟာ ဆန့်နိုင်ကြုံ့နိုင်စွမ်း အတော်နည်းပါတယ်။ သဘာဝအရလည်း မဆက်ဆံမီ မိန်းမကိုယ်က ထွက်လာရတဲ့ အရည်ဟာ အဆင်ပြေအလွန်းလို့ Honorably discharge လို့တောင် ခေါ်သေးတယ်။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ တခါတလေ လိင်တံရဲ့ အရေပြားကလည်း ပွန်းပဲ့သွားတတ်တယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့လိင်ဆံဘို့ Lubrication ချောဆီ သုံးရတယ်။ KY Jelly (KY Sexual Lubricant) က ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံးပါ။ သူက တခါသုံး မလာပါ။ တခါသုံး မဟုတ်တာ မှန်သမျှ စိတ်မချရတာ သိမှာပါ။ Jelly သုံးပေမဲ့ နဲနေရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အလျင်အမြန် ထိုးသွင်းရင် သေခြာပေါက် စအို စုတ်ပြဲ ပါလိမ့်မယ်။ စုတ်ပြဲတာက သွေးထွက်ချင်မှ ထွက်ပါမယ်။ သေးသေးလေး ဖြစ်အုံးတော့ အင်မတိ အင်မတန် သေးငယ်လွန်းလှတဲ့ ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေအတွက်ကတော့ (ဆူပါ-ဟိုင်းဝေး) ဖြစ်နေမယ်။
အဲဒီကနေ ပိုးဝင်လို့ ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကတော့ အသဲရောင်ဘီ၊ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ (ရှန်ကာ၊ ကြွက်နို့၊ ဖတ်းဂတ်စ်၊ ဂနိုးရီးယား) နဲ့ HIV တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ စအိုဘေးက အရေပြားမှာ ပိုးရှိရင် ယားနာဆိုတာလဲ ကူးနိုင်ပြန်ပါသေးတယ်။ နောက်တချက် ယောက်ျားဆီးပြွန်ကပဲ Urine ဆီးရော Semen သုတ်အရင်ထွက်တဲ့ အရည်ချွဲရော၊ Sperm သုတ်ရည်ရော ထွက်ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆီးလမ်းရောဂါပိုးကလဲ စအိုထဲ ၀င်နိုင်ပြန်ရော။ စအိုကင်ဆာ ကိုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေစာရင်းလောက်သာ ထည့်ပါမယ်။
Annal canal အရှည်က 2.5 to4cm သာ ရှိတာမို့ စအိုအထဲကို ဘယ်လောက်ပဲ ၀မ်း မရှိအောင် လုပ်ထားပါစေ ဘာထည့်ထည့် ပေကျံလာမှာပါ။ စအိုနဲ့ ထိပြီးသားအရာကို အမျိုးသမီးရဲ့ ဆီးလမ်းအ၀နဲ့ မထိပါမှ ဆီးလမ်းပိုး ၀င်တာ မဖြစ်မှာပါ။ မိန်းမကိုယ်အ၀ကို တဆက်တည်း ပြန်သုံးရင် ပိုးဝင်နိုင်တယ်။ ပါးစပ်ဆိုတာတော့ ပြောမနေနဲ့ပေါ့။ ဆိုတော့ မတိုင်ခင်ရော၊ ကြားထဲမှာရော၊ ကိစ္စပြီးချိန်မှာရော ဘယ်လောက် ကရိကထများလိုက်သလဲ။ သာယာမှုနဲ့ မျှပါသလား။ တပ်မက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုက ရလိုတာဟာ သာယာမှု၊ ကျေနပ်မှု နဲ့ ပြည့်ဝမှု မဟုတ်ပါလော။
လိင်ဆက်ဆံတာဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိစ္စပါ။ အသက်လည်းပြည့်ပါမှ နှစ်ဦးသဘောတူဆိုပါမှ Rape မဖြစ်မှာ။ နှစ်ဦး သဘောတူ ဆိုရာမှာ (နည်း)ပိုင်း၊ (အနေအထား)ပိုင်း၊ အချိန်ပိုင်းတွေမှာပါ နှစ်ဦးသဘောတူမှ ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ တဦးသဘောမတူတာကို တဦးက နည်းလည်မှုပေးဘို့ လိုမှာပါ။ မဟုတ်ရင် တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာ ဥပဒေက ခွင့်မပြုပါ။ တကယ်လို့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ စအိုလိင်ဆက်ဆံနည်း သုံးမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားဖြစ်သူဟာ Physiological and Psychological nature of the practice ဇီဝကမ္မဗေဒ အရရော စိတ်ပညာအရပါ နားလည်ဘို့ လိုမှာပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲ ထည့်ဆွေးနွေးရအောင်။ သဘာဝအားဖြင့် ကျား-မ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ ဆက်ဆံချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ယောက်ျားရဲ့ ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကို Submission or Surrender စိတ်လိုလက်ရ နာခံလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမရဲ့စအိုကို ဆက်ဆံချင်သူ ယောက်ျားမျိုးကတော့ ဒီလို လွှမ်းမိုးချင်စိတ် Domination ထက် ကဲပါတယ်။ စိတ်ပညာအလိုအရ အဲလို ယောက်ျားသားတွေဟာ Male domination complex ကျားလွှမ်းမိုးစိတ်ကဲမှု၊ Sexual deficiency complex လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှု၊ Low self-esteem မိမိကိုယ်ကိုယ် အထင်ရောက်မှု၊ Demeaning attitude towards women မိန်းမသားနဲ့ပတ်သက်ရင် အမြင်ကွဲလွဲမှု တခုခု ရှိနေတတ်ပြီး၊ မေတ္တာ-ချစ်တာ အားနည်းသူ ဖြစ်နေတတ်ပါသတဲ့။
နည်းအဆန်း စမ်းသူများ (ကွန်ဒွန်)သုတတော့ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှိအုံးတော့ (အေနယ်)နည်း သုံးရင် ပိုခိုင်မာတဲ့ (စပယ်ရှယ်-ကွန်ဒွန်) သုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမေရိကမှာ အရေးပေါ်ဌာနတခုကိုလာတဲ့ စအိုထဲ ပစ္စည်းတခုခု (Foreign body) ၀င်လို့ လာသူတွေထဲမယ် ၇၈%ဟာ စအိုလိင်ကိစ္စကြောင့် ဖြစ်ရပါသတဲ့။
နောက်ဆက်တွဲက စအိုလိင်ဆက်ဆံတာ များလာတာနဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် စအိုထိန်းကြွက်သားတွေ အားနည်းလာမယ်။ ၀မ်းထိန်းရတာ၊ လေထိန်းရတာ အားနည်းလာမယ်။ ၀မ်းသွားမမှန်ဖြစ်လာမယ်။ Kegel exercises လေ့ကျင့်ခန်း အလုပ်ခိုင်းယူရပါလိမ့်မယ်။ လူကြားသူကြား သွားတိုင်း (ဒိုင်ပါ)တမျိုးကို အမြဲအပိုဝတ်ထားရပါတော့တယ်။
သိပ္ပံအရ ပြောပြော၊ သဘာဝအရ ဆိုဆို၊ ဆင်ခြင်တုံတရားအရ တွေးတွေး၊ စအိုဟာ စွန့်ထုတ်စရာသာဖြစ်ပြီး မိန်းမကိုယ် (မွေးလမ်းကြောင်း)လို ထိုးသွင်းရမဲ့ဒွါရ မဟုတ်တာ သေခြာပါတယ်။ သဘာဝတရားနဲ့ ဆန့်ကျင်တာ နောက်တခုကတော့ အထက်ကနေ အောက်ကို ဆင်းသက်တဲ့ လားရာကို ပြောင်းပြန် လုပ်မိတာပါ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ သဘာဝဆိုတာကို Environment သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ဂေဟစနစ် နဲ့ Organic မပြုမပြင် အစားအသောက်ကိုသာ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ပြောနေကြပြီး၊ သဘာဝမကျတဲ့ လူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကိုကြတော့ ပိုဆိုးဆိုး လာနေတာဟာ အဆီအငေါ် မတည့်ဘူး ထင်ပါတယ်။
လူကြီးတွေက ဆုံးမတယ် အိမ်ပြင်ကအမှိုက် အိမ်ထဲမသွင်းနဲ့တဲ့။ ဆရာဝန်က အကြံပေးချင်တယ် အညစ်အကြေးကို အသစ်ကလေး မထင်နဲ့လို့။
Labels: Behavior change communication, Reproductive Health, Sex Education
အလွန်ကိုဗဟုသုတရစေပါတယ် တလွဲသုံးတာတွေ ထင်နေတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sai Wai Aung said...
ဆရာ DTS ရှင်းပြတာ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်တယ်... ဒါတောင် မကြောက်ဘဲ နေလို့ကတော့ လူကြားသူကြားထဲ အီးတန်းလန်းနဲ့ နေကြပေါ့။
...ဒီဆောင်းပါးကို သူငယ်ချင်းတွေဆီ Mailအဖြစ် ကူးပြီး ပို့ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
အခုလို အကျယ်တ၀င့် နားဝင်အောင် ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Thi ရဲ့ အမျိုးသားက မသိနားမလည်လို့ မှားတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဒေါသဖြစ်၊ ရန်တွေ့ပြီး ဖြေရှင်းဖို့မလိုအပ်ပဲ ဒီပို့စ်ကို ပေးဖတ်ပြီး အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် သေသေချာချာ ရှင်းပြရင် နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ စာလာဖတ်လို့ ရတဲ့အသိကြောင့် မိသားစု၊ အိမ်ထောင်စု တခုခုကို ထိခိုက် နှစ်နာစေသွားစေတာမျိုး ဘာတခုမှ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကလေးတွေ ရှိရင်ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒီက ရတဲ့ ဗဟုသုတကြောင့် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်တာကို နှစ်ဦးစလုံး သိသွားပြီး လိုက်နာကြမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နားလည်မှုနှင့် ဘယ်သူမှ မနှစ်နာတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကို တည်ဆောက်ပြီး သာယာတဲ့ မိသားစုဘ၀ကို ရသွားတာမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
Thank you so much for this information. It is very important for everyone.
Please let me forward this post to my friends.
(ကွန်မင့်) ပေးသူတွေက အားပေးကြတာရော၊ အပြုသဘောတွေ ရေးကြတာရောအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်မျိုးကို (ဗမာတွေအကြား) ရေးရတာ သိတဲ့အတိုင်း အတော်ကြီး သတိကြီးကြရတာမို့၊ ရေးဘို့ အားပေး၊ တိုက်တွန်း မေးမြန်းသူတွေကိုပါ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
တကယ်တော့ sexual intercourse ရဲ့ function ဆိုတာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားဖို့ပါ။ လူဆိုတော့ အသိဥာဏ်ကမြင့်တော့ ခက်တော့ အခက်သား။ တစ်ပုံစံတည်းကြီးနေရတာ မကြိုက်ကြလို့ လက်တည့်စမ်းကြရင်း ဒီ sodomy လို့ခေါ်တဲ့ anal intercourse က စလာတယ်ထင်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် အရှေ့တိုင်းမှာ ဒီကိစ္စက သိပ်ပြိး မကျယ်ပြန့်လှပါဘူး။ အနောက်တိုင်း အပြာကားတွေရဲ့ cultural invasion ရဲ့ မကောင်းတဲ့ရလဒ်ပေါ့။
ဆရာတင့်ဆွေပြောသလို အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ သာ ဖတ်မယ်ဆိုရင် အသက်ကန့်သတ်ချက်က မများလွန်းဘူးလားလို့။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ ကလေး ၂ယောက်လောက် ရှိတည့်သူတွေ မနည်းလှပါဘူး။ ဒီ abnormal intercourse တွေရဲ့ health impact တွေကို high school level မှာ ကတည်းက ကလေးတွေကို ပညာပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ အချိန်ရရင် oral sex ရဲ့ မကောင်းတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း ရေးပေးပါအုံး။ အခုလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ post လေးကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
်အင်မတန် ကောင်းတဲ့ပို့စ်ပါဆရာ စအိုကနေ ဆက်ဆံတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိပေမဲ့ သဘာဝ နဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာမို့ လုံးဝကို လက်မခံနိူင်ပါဘူး ခုလိုဖတ်လိုက်ရတော့ ပိုသဘောကျ ကျေနပ်သွားခဲ့ပါတယ်...အဲလိုသိသင့်တဲ့ပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ဆရာ...:)
Dr. ဇီဝက said...
ဆရာ့ ရဲ့  တချို့ ပိုစ့်တွေ ဥမာ အသက်၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ လိုမျိုးစာတွေကို ကျွန်တော် ဆေးလောက မှ တင်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Dr. ဇီဝက ပါဆရာ။
ဆေးလောက က ပါ။ ခုတော့ ဆေးလောက က နဂိုနေရာက ရွေ့ လျားပြီး Facebook ကိုရောက်သွားပါပြီ။ ဆရာခွင့်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ link က www.facebook.com/medicalworld ပါ။
Kyang Wang said...
ခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ အမျိုးသမီးရာသီထိန်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တာလည်း ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်
”အညစ်အကြေးကို အသစ်ကလေး မထင်နဲ့........”ခေါင်းစဉ်ထပ်တပ်ပေးရင် အလွန်လိုက်ဖက်ညီတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရှိတဲ့ ပို့စ်ကောင်းလေးဖြစ်သွားမှာလို့ ထင်မိပါတယ်။
ဆရာ ရာသီမလာတာ နှစ်ပတ်ကျော်သွားပါပြီ. ကေသီပန်ဆေးလည်း သောက်ပါတယ်အညွန်းတိုင်း ဒါပေမဲ့ ဘာမှမထူးခြားလာသေးဘူး .. အသိတစ်ယောက်က ပြောလို့ ထန်းလျှက်နဲ့ဂျင်းနဲ့ ကြိုသောက်ပေးရင် ရာသီလာတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ဆရာ . . ရာသီလာအောင် ဘယ်ဆေးများကို သောက်သုံးသင့်ပါသလည်း ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဆရာ ..
To moepan said...
ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ နောက်ခံ ကျန်းမာရေး ရာဇ၀င်တွေ သိမှသာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာဆေးတွေကို ကျွန်တော် သိပ်မသိလှပါ။
Nay Lin Soe Kyi Kyi Win said...
စအိုကို ဆက်ဆံတဲ့ အပြစ်လက္ခဏာတွေပြထား
တာတွေကိုလည်း သဘောကျပါတယ်...ဒါပေမယ့် ပါတဲ့ အပေါက်တိုင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက..မကောင်းတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ထုတ်ပေးတဲ့ လမ်းပေါက်တွေပဲမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ... အပေါက်တိုင်းဟာ...ရွံရှာဖွေကောင်းပါတယ်...စအိုပေါက် တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်ပါ...အောက်ကို မစင်သာ ချောဆင်းသက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး...မိန်းမကိုယ် အပေါက်ကလည်း...ဓမ္မတာသွေးပုတ်တွေ ထုတ်ပေးနေတာမဟုတ်ပါလား...စအိုကို လိင်ဆက်ဆံတာက မကောင်းတာတော့ မကောင်းတာပဲပေါ့...Thi ဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် ပေးထားတဲ့ Commentဖတ်ကြည့်တော့...ယောက်ျားတိုင်းဟာ တိရစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်ရှိကြသလိုဖြစ်နေတယ်....ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့..တခြားယောက်ျားကို အတူနှိုင်းပြီး တဘက်သက် စွပ်စွဲ မရေးသင့်ပါဘူး...ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတပေး ဆိုက်တွေဆိုတာ....လူတကာဖတ်ကြသလို...နိုင်ငံတိုင်းလည်း ဖတ်ရှုကြပါတယ်.......